I-China MS-WG 120 TUBE BENDER Ukukhiqiza kanye Nemboni |Mingshu
Umshini Wensimbi Owenziwe
Izingxenye ze-Iron Ezenziwe
Umkhiqizo owenziwe ngomgunyathi
Izingxenye Zensimbi Ezenziwa
insimbi eyenziwe ngensimbi
Imikhiqizo Yensimbi Eyenziwe
Isango Lensimbi Elisebenzayo
Uthango Lwensimbi Olwenziwe
I-Laser Cutting Product
I-Laser Cutting Baluster
I-MSC 41 SERIES YAMANDLA EMNYAMA ISANDULO
UKWAKHA OKUQONDILE KUSIKWELETU SETHUBU LOMTHETHO
ERW/HFW TUBE MILLS
IHYDRAULIC NGOKUZENZAKALELAYO UMSHINI
UMSHINI WE-MULTI-FUNCTION PUNCH KANYE WOKUSHEA
I-MS-DY16 i-hydraulic forming machine
I-MS-DN25C TWISTING MACHINE
Umshini we-MS-DK20 we-hydraulic buckle
Uhlobo lwe-MS-WZP lwe-ultra-high frequency induction heat e...
I-MS-HG yochungechunge lwe-embossing umshini wepayipi
Izici ze-HBMS Tube Bender Machine
Umthamo omuhle wokusebenza
Kuphephile futhi kulula ukuyisebenzisa
Kulula ukushintsha isikhunta
Lo mshini ubizwa nangokuthi umshini wokugoqa wamapayipi.Ingakwazi ukugoba amashubhu abe ama-arcs nama-engeli ahlukene ngokwezidingo ezahlukene.Umshini we-HBMS wepayipi we-bender awukwazi ukugoba ipayipi eliyindilinga kuphela, kodwa futhi ucubungula ishubhu lesikwele nensimbi eyisicaba.Kulula futhi kuyavumelana nezimo ukuyisebenzisa.Imikhiqizo yayo ivame ukusetshenziswa ezitebhisini kanye nenhloko yomnyango wamasango.Lona umshini okulula ukunganakwa kodwa odingeka kakhulu.Uma udinga ukucubungula amapayipi nezinye izinto zensimbi, umshini we-HBMS tube bender kungaba yisinqumo esihle.
Usayizi Wesikhunta (mm)
Isikhunta ozikhethela sona
Isisindo Esiphelele (KG)
Izinzuzo ze-HBMS Tube Bender Machine
Umshini we-HBMS Tube bender odayiswayo ukhiqizwa izinto ezinolwazi ngezinto ezisezingeni eliphezulu.Kuyikhwalithi enhle yomshini wokugoba we-HBMS Tube okwenza udume kakhulu emakethe yamazwe ngamazwe.Nakuba izinga lalo mshini lihle, intengo yomshini wokugoba ipayipi ayibizi.
Ungowabo onjiniyela bokuklama bezinga eliphezulu ukuze bahlangabezane nawo wonke amaklayenti okucatshangwa ukuthi awafunde.
Sinikeze imibono yakho, yiba impilo yobuciko ibe lula kakhulu.
Ukulawula Ikhwalithi Eqinile
Ukulawulwa Kwekhwalithi Okuqinile kwenza zonke izinto zihlangabezane nesicelo sakho
Isevisi yamahora angu-24 ku-inthanethi
phakathi namahora angu-1-2 phendula ngesikhathi
sína ngemva kokuthengisa isevisi
Amakhono Nobungcweti Bethu
Isungulwe ngo-2017, i-Hebei Mingshu Import and Export Trade Co., Ltd. (HBMS) ingumhlinzeki oholayo embonini yokuhlobisa yaseChina.Sihlinzeka ngochungechunge lwemishini yensimbi eyenziwe, isikhunta, izinto zokuhlobisa, izesekeli, izakhi zokuhlobisa, kanye nemikhiqizo yensimbi eyenziwe, njengocingo, isango, umzila wezitebhisi, i-balcony railing, i-handrail, i-grill yewindi, umnyango wokungenela, njalonjalo.Ngesikhathi esifanayo, sisanda kwengeza izesekeli ze-aluminium, amaphaneli e-aluminium, amasango e-aluminium, iminyango yethusi, nezitebhisi zethusi.Imikhiqizo yethu inezinhlobonhlobo zezicelo, kusukela kumasango egceke, iminyango yokungena, unogada wamafasitela, izitebhisi, uthango, ifenisha, izimpawu, njll. Umsebenzi wethu uwukwenza nje umcabango wakho uthuthuke.
Dinga usizo?Qiniseka ukuthi uvakashela izinkundla zethu zokusekela ukuze uthole izimpendulo zemibuzo yakho!
Ingabe inkampani yakho ikhiqiza noma inkampani yokuhweba?
Singabakhiqizi abaqeqeshiwe futhi sinesipiliyoni seminyaka eyi-10 kumugqa womshini wobunjiniyela.
Kuthiwani ngekhwalithi yomkhiqizo?
Umshini ngamunye uzohlolwa ngaphezu kwamahora angu-24 ngemva kokuphothula.
Zonke izici zisebenzisa uhlobo oluthembekile noludumile olusebenza nathi eminyakeni engama-20.
Ingabe umshini wakho ugunyaze i-ISO?
Yonke imishini yethu yayigunyazwe i-ISO9001 edlule, ezokwenza ikhwalithi engcono kakhulu yawo wonke amakhasimende.
Ingabe kungenzeka ukusebenzisa i-LOGO yethu noma umklamo ongokwezifiso okhethekile?
Yebo, akunankinga.. Sinethimba lezobuchwepheshe locwaningo olusha nokuthuthukiswa.
Yonke imikhiqizo inewaranti?
YEBO, isikhathi sethu sewaranti unyaka owodwa
Side kangakanani isikhathi sokuhola?
Yonke imishini isitokweni futhi imvamisa Izinsuku ezi-5-7 zanele uma zinesikhunta esivalekile.Uma ngesikhunta esikhethekile, mhlawumbe isikhathi sizoba side.
Ithini isikhathi senani kanye nendlela yokukhokha?
Singacaphuna intengo ye-EXW, FOB, CIF kanye ne-CNF.Ungasikhokhela nge-T/T, L/C.
Usulungele ukuqalisa?Xhumana nathi namuhla ukuthola isilinganiso samahhala!
Okwedlule: MS-WG 60 TUBE BENDER
Olandelayo: UMSHINI WE-MULTI-FUNCTION PUNCH KANYE WOKUSHEA
I-Handrail Pipe Machine
Umshini Wepayipi Lesandla se-MS-FSG76A
I-MS-DL100 Cold Rolling Embossing Machine
I-Hebei Mingshu Import&Export Trading Co., Ltd.
Xhumana nathi namuhla ukuze uthole ukubonisana nokuklama.
Phendula kuwe ngokushesha ngangokunokwenzeka
Ikheli:Igumbi 1-2-303, Shuiyincheng, Zhiwuyuan Road, Xinhua District, Shijiazhuang City, Hebei Province, China.